Saafi Films - News: DHAGAYSO: Sababihii ay Militeriga Kenya usoo galeen Soomaaliya iyo amaan xumada wali Kenya ka jirta oo la cadeeyay
DHAGAYSO: Sababihii ay Militeriga Kenya usoo galeen Soomaaliya iyo amaan xumada wali Kenya ka jirta oo la cadeeyay
Ciidamada Kenya maxey aheyd sababtii kadanbeysay in ay gudaha u soogalaan Dalka Soomaaliya gaar ahaan Gobolada Jubooyinka oo ay haatan dagaal xoogan kula jiraan Al-Shabaab.
Hadaba sababta ay ciidamada Dalka Kenya ay usoo galeen Soomaaliya ayaa waxaa kahadlay Xoghayaha Gudiga Nabad Galyada Magaalada Gaarisa Xasan Cismaan Shuuriye kaas oo lahadlay warbaahinta Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ay aheyd sababtii kadanbeysay in ay Ciidamada Kenya ay gudaha ugalaad Dalka Soomaaliya amni daro ku korartay Gobolka Waqooyi Bari gaar ahaan Magaalada Gaarisa.
Waxa uu sheegay mar uu arimahaas kahadlaayay in markii ay kubadatay Magaalada Gaarisa dilalka qaraxyada iyo afduubyada loo geysto dadka ajaanibta ah ay ugu danbeyntii sababtay in ay Ciidamada Kenya ay gudaha u galaan dalka Soomaaliya oo ayna haatan kadagaalamayaan Gobolada Jubooyinka iyo Gedo.
Xoghayaha Gudiga Nabad Galyada Magaalada Gaarisa Xasan Cismaan Shuuriye waxa u intaa raaciiyay hadalkiisa tan iyo marki ay Ciidamada Kenya ay gudaha ugaleen Soomaaliya in ay yaraadeen falalka kadhanka ah amaanka ee kadhici jiray Gaarisa Sida uu sheegay.
Waxaana uu ugu danbeentii kawar bixiyay Xaalada amaan ee haatan kajira Magaalada Gaarisa waxanaa uu sheegay in haatan ay tahay Gaarisa Magaalo nabdoon oo aysan iminka falal amaan dari ah oo lasheegi karo aysan kajirin sida uu sheegay.
Dhawaan aye aheyd markii labo katirsan askarta Ciidamada Dowlada Kenya sicad laagu toogtay Magaalada Gaarisa ee Gobolka Waqooyi Bari iyadoona ay Ciidamaad Kenya Howgalo ay sameeyeen ay dadbadan oo Soomaali ah ay u qab qabteen dilalkaas oo ilaa iyo haatan gacntooda kujira.
4,493,754 unique visits